SAWIRRO: Xildhibaano iyo Wasiiro ka shiray Arrimaha fatahaadaha | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA SAWIRRO: Xildhibaano iyo Wasiiro ka shiray Arrimaha fatahaadaha
SAWIRRO: Xildhibaano iyo Wasiiro ka shiray Arrimaha fatahaadaha
Magaalada Baladweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan waxaa kulan ku yeeshay Xildhibaano katirsan labada aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya iyo Xubno kamid ah Guddiga Gurmadka Fatahaadaha ee Maamulka Hir-Shabeelle, iyaga oo ka wada hadlay arrimo la xiriira fatahaadaha.
Kulanka ayaa waxaa Goobjoog ka ahaa Madaxweyne kuxigeenka Mamaulka Hir-Shabeelle Cali guudlaawe Xuseen ayaa waxaa diirada lagu saaray sida uu u socdo howlaha loogu gurmanayo dadka ay saameeyeen Fatahaadaha Wabiga Shabeelle ee Magaalada Beledweyne.
Madaxweyne ku Xigeenka Hir-Shabeelle Cali Guudlaawe ayaa guddiga kula dardaarmay in dadka Jilicsan ee liita iyo Dadka baahiyaha gaarka ah qaba muhiimada ugu wayn ee gurmadka la siiyo.
Ugu dambeyn kulanka ayaa la iskula gartay in si nidaamsan looga qeybiyo deeqaha shacabka uu saameeyey fatahaada uu Wabiga Shabeelle ka sameeyey Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
Xildhibaanada ka tirsan baaralmaanka Soomaaliya ee kulan ka qeyb galay ayaa waxaa ay kala ahaayeen, Xildhibaan Daahir Amiin jeesow, Xildhibaan samiiro Xildhibaan khaliif Cabdi Cumar iyo Xildhibaan Faadumo Qamar Faarax.